Masera Benediktina ao Joffre Ville
Napetraka eo ambany fiarovan’i Nd Joany Batista ny monastera eto Joffeville.
Izy manko no ilay nanondro an’i Jesoa tamin’ny mpianany roalahy hoe : « Indro ny zanak’ondri’Andriamanitra » (Jn 1, 36).
Lasa nanaraka azy niaraka tamin’zay izy roa lahy. Nitodika i Jesoa ka nahita azy ireo anraka azy dia nanontany hoe : « Inona no tadiavinareo ? » « Ry mpampianatra ô, aiza ianao no mitoetra ? » « Avia ka jereo » hoy ny navaliny azy ireo. (Jn 1, 37-39)
Tahaka azy ireo koa izahay, voaantso hanara-dia azy, ka hiara – mitoetra aminy.
Ny fiaraha-mitoetra amin’i Kristy isan’andro isan’andro, mahatonga fitoviana aminy satria mandre ny teniny, mandinika azy sy mandray azy ao am-po, mibanjina sy midera azy isan’andro amin’ny asa rehetra atao sy amin’ny vavaka.
Ao anatin’ny fifankatiavan’ny mpirahavavy ohatra nomeny tamin’izy nanasa ny tongotry ny : mpianany satria hoy izy hoe « mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho ».
Ka mahatonga hanana ny toe-po amam-parnahiny sy ny fitiavana miredareda ao anatiny « tonga hanipy afo eto an-tany aho, akory ny fahamaizako hirehetan’izany sahady » hoy Izy ; ny afom-pitiavana harehitry ny Fanahy Masina hanenika an’ izao tontolo izao izany, omban’ny hafaliana sy fiadanam-po vokatry ny asa fanavotana nataony.
Anjaran’ny tsirairay indray koa ary amin’izao ny manondro ani kristy amin’ireo rehetra tonga ato amin’ny monastera.